कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने सम्बोधनहरु • Health News Nepal
कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने सम्बोधनहरु
✍️ प्रा.डा. शुभेष राज कायस्थ
२०१९ डिसेम्बरको अन्त्यतिर चिनको उहान शहरमा कोभिड -१९ संक्रमण देखिएसङ्गै निरन्तर फैलिदै गएर हाल यो महामारी बाट बिश्व नै प्रभावित छ। नेपालमा पनि यसको पहिलो संक्रमण माघको दोस्रो हप्तामा देखियो र त्यसपछि क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ।
कोभिड -१९ महामारीको रोकथाम नियन्त्रणको लागि गर्नुपर्ने सम्बोधनहरु यस बमोजिम छ्न -:
१) बिश्वब्यापी महामारी फैलिरहेको छ यस समयमा एउटै समुहमा जुन भारतबाट लाखौंको संख्यामा नेपाल फर्किसकेका छ्न । भारतबाट फर्केर क्वारेन्टाइनमा बसेका मध्ये ९० प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको छ।
२) नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमित मध्ये केही प्रतिशत मात्रै समुदायमा गएको छ अझै यसलाई नियम , सुरक्षा र समुदायका अगुवाहरुले बिशेष पहल चालेमा संक्रमणलाई कम गर्न सकिन्छ । यदि समुदायमा फैलियो भने लाखौंमा संक्रमण फैलिने सक्ने अनुमान रहेको छ।
३) समुदायमा संक्रमण फैलिसकेपछि भन्दा पनि उपचारको लागि पूर्व तयारी गर्न जरुरी देखिन्छ ।
४) ५० हजार संक्रमित पुग्यो भने लक्षणहरु प्राय २० प्रतिशत मानिसलाई मात्रै रोग लाग्दछ।
५) १० हजार मानिसहरू लक्षण सहित उपचारको लागि भर्ना हुन्छन् । करिब ५ प्रतिशत (५००) जना आइसियूमा रहन्छ्न । यसको लागि पूर्व तयारी , भ्यान्टिलेटर लगायत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। डाइग्नोष्टिक भएका वा संक्रमण भएका जति भारतबाट आएका छ्न।
यस तर्फ सरकार, स्थानीय , जनसमुदायले सचेतना जगाउनु पर्ने देखिन्छ । मानिसहरूले मास्क , सामाजिक दुरी कायम र स्यानिटाइजरको प्रयोग नियमित गर्नुपर्दछ। बिरामीको संख्या वृद्धि हुँदा नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनावट क्षमता अनुसार भ्यान्टिलेटर विश्लेषण गर्नुपर्दछ। क्षमताको विश्लेषण संगै स्वास्थ्यकर्मी लगायतले यस बिच छुटको विश्लेषण गर्न जरुरी छ। अहिलेसम्म नेपालमा अस्पतालमा २६ हजार ८ सय २० शैया , १५९५ सघन उपचार कक्ष र १ हजार भेन्टिलेटर मात्रै छ्न। यो एकदम थोरै मात्रामा हो ।
कोरोना संक्रमित बड्दै गईरहेका बेला यी उपकरणहरु कोरोना सेवाको लागि एक तिहाई मात्रै दिन सकिन्छ । कोरिना संक्रमण दुर्गम बस्तिमा पुग्दै जादा झन भयावह आउन सक्ने खतरा छ । त्यसैले अहिले देखिने सरकार, स्थानीय र संघीयले पूर्व तयारी गर्न अपरिहार्य छ। संघीय भन्दा ग्रामीणमा नागरिकका पहुँचलाई सरकारले सेवा दिन सकिरहेको छैन । नेपालमा पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा शहरी भन्दा ग्रामीण भेगमा संक्रमण बढी फैलिरहेको छ। यसको उपचारको लागि स्थानीयको ठूलो चुनौती रहेको देखिन्छ।
Tags: Child HealthCorona Virus #Covid19dr.shubesh Raj kaysthaNPHL
अल्का अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी सहित ७ जना कोरोना संक्रमीत #Covid19
संघीय दाँत तथा मुख रोग अस्पताल स्थापना सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी
सरकार अध्यादेश त ल्यायौ तर स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा खोई ??
के हो पल्स अक्सिमिटर ! कसरी प्रयोग गर्ने ? #Oximeter
सुरक्षित रहन कुन मास्कको प्रयोग गर्ने ? #Safety #UsingMasks
महिनावारी हुँदा हुने दुखाई- कारण, लक्षण चिन्ह तथा उपचार विधि #Dysmenorrhoea #PeriodPain
Pingback: कोरोना प्रभावित जिल्लामा संकटकाल घोषणा गर्न चिकित्सक‌ संघको आग्रह • Health News Nepal
नेपाल स्त्री रोग तथा प्रसुति बिशेषज्ञ समाज नेसोगको प्रेसिडेन्ट इलेक्टमा डा. सरोजा पाण्डे निर्वाचित
कोरोना भाइरसको कारणले छालामा हुने समस्या #Covid19
जनै खटिरा – लक्षणहरु, निदान, उपचार #HerpesZoster
Declaration of Seventh National Summit of Health and Population Scientists in Nepal
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा २५० प्रयोगशाला कर्मीलाई पिसिआर सम्बन्धी तालिम प्रदान
सिमानाकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी लगायत सरोकारवालाहरुको लागि कार्यक्रम
टेकु अस्पतालको निर्देशकमा डा. अनुप बास्तोला नियुक्त
नेसनल हेल्थ केयरले बजारमा रेमडिसिभिर औषधि बिक्री वितरण गर्न शुरु
चरक मेमोरियल हस्पिटलमा अत्याधुनिक स्तरको क्याथ ल्याब सेवा शुरु गर्दै
नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट पुष्टि #NepalVariant